Umaka: ukudluliswa kwamafayela amakhulu | Martech Zone
Umaka: ukudluliswa kwamafayela amakhulu
Ngisanda kubhala ngokuhlangenwe nakho kwami ​​ngokufaka ngobuningi umklamo wakho. Okuhlangenwe nakho bekukuhle futhi ngixoxile ngokunyakaza kwe-No Spec nokuphikisana namasayithi afana nawo. Ngokuthunyelwe okuxhasiwe, kuleli sonto ngizame ama-99designs. Okuhlangenwe nakho kuma-99designs kwakufana kakhulu futhi, ngiyakuzonda ukukusho, kusesekulula futhi kujabulisa. Nginqume ukukhokhela isizinda esisha se-Twitter esithuthukise kangcono inkampani yami, ibhulogi yami kanye nezinsizakalo zami.